‘गीतसङ्गीत मनोरञ्जन मात्र होइन’ : शर्मिला थिङ
कलाक्षेत्रको उर्वर भूमिको रुपमा परिचित काभ्रेको साविक गाविस देवीटार– ९ र हाल धुलिखेल नगरपालिका– १ मा बुबा प्रेमबहादुर थिङ र आमा माइली तामाङको कोखबाट वि.सं. २०५० सालमा जन्मिएकी शर्मिला थिङ गायिकाको रुपमा आफूलाई चिनाउँदै छिन् । अध्ययनसँगै गीतसङ्गीतमा लागेकी थिङ सानै उमेरदेखि गीतसङ्गीतमा रुची राख्थिन् । थिङले हालै ‘क्यार्सेला चिते नाम्साग्याम’ बोलको गीत र सोको म्युजिक भिडियो बजारमा ल्याएकी छिन् ।
ध्यमवर्गिय परिवारमा जन्मिएका थिङको कलाकारिता क्षेत्रको यात्रा एक वर्ष अघिदेखि शुरु भएको हो । सेतीदेवी माध्यामिक विद्यालयबाट २०६७ सालमा एसएलसी उतिर्ण गरी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गरेकी उनले अध्ययनसँगै आफ्नो कलाकारितालाई अघि बढाउँदै छिन् । रेडियो जक्कीको रुपमा समेत सक्रिय रहेकी थिङले विगत दुई वर्षदेखि जिल्लाकै रेडियो सेफर्ड ८८.४ मा कार्यक्रम संचालिकाको भूमिकामा छिन् । उनी तामाङ भाषाको कार्यक्रम ‘सेम्ला काइरान’ र नेपाली भाषाको ‘सेफर्ड आवर’ कार्यक्रम मार्फत् हजारौं श्रोताहरुको मन मुटुमा बस्न सफल छिन् । कलाकारिताको सुरुवाति दिन विभिन्न दुःख, कष्ट र संघर्षमै बितेको बताउँने उनको पहिलो गीत रेकर्डिङ असफल भएको र दोस्रो पटकको प्रयास भने सफल भएको बताईन् । स्वास्थ्य विषयमा सिएमए समेत उत्तीर्ण उनले बिरामीहरुको सेवा गर्ने उद्धेश्यले गाउँमै मेडिकल पनि सञ्चालन गरिरहेकी छिन् ।
गीतसङ्गीत मनोरञ्जन मात्र होइन
कताकारिता क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती, विकृतिलगायत विविध विषयमा भएको कुराकानीको क्रममा उनीले भने, ‘गतिसङ्गीतले मनोरञ्जन मात्रै होईन आनन्द पनि तुल्याउँछ । मेरो सौखको विषय हो कलाकारिता । रेडियोमा अरुको गीत सुन्दा मलाई पनि गीत गाउन पाए हुन्थ्यो । मेरो पनि नाम कलाकारितामा जोडिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्योे । कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नु मेरो सानैदेखि रुची नै भन्दा हुन्छ । गीतसङ्गीतले मान्छेलाई मनोरञ्जन मात्रै होईन आनन्द पनि तुल्याउँछ । निकै नै खुशी लागेको छ । गीतसङ्गीतमा आफूलाई पनि चिनाउन पाएको छु । अझै राम्रा राम्रा गीतहरु गाउने रहर छ यो मेरोे आफ्नै प्रस्तुतीमा आफैले गाएको गीत हो । त्यो गीतको म्यूजिक भिडियो पनि सार्वजनिक गरेको छु ।’
मायालुसँग तीन वर्षपछि भेट
पुरानो दुई प्रेमीप्रेमीका बीच जात्रामा भेट हुँदा मायाँ पिरतीकै गीतमा समाबेस गरिएको छ, ‘केर्सेला चित्ते नाम्सा... ’ (उताको चित्ते गाउँमा) । सेलो भाकाको यो गीतको भिमिडयो हालै सार्वजनिक भएको छ । गीत र भिडियोमा छुटेको आफ्नो मायालुसँग तीन वर्षपछि भेट भएको दृश्य समेटिएको छ । यसै साता अन्जना क्रिएसनले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा राज तामाङ र आयिसा वाइबाले अभिनय गरेका छन् । वाङ्छु राज वाइबाको शब्दमा रहेको गीतलाई संगीत बैरागी मोक्तानले भरेका छन् भने स्वर गायिका म शर्मिला थिङले दिएका छन् । अमिर दोङले निर्देशन गरेको म्यूजिक भिडियोको छायाङ्कन विक्रम मोक्तानले गरेको छ । पहिलो पटकको गीत बजारमा आउन नसके पनि गीतसङ्गीतमा रुचि रहेको मेरो यो भिडियो सोचे जस्तो बनेको छ । गीत तथा भिडियो मायाप्रिती गाँस्ने युवायुवतीहरुको भावनालाई मध्यनजर गरी तयार गरिएको हो । म साथी संगी र आफन्तको प्रेरणाले गर्दा म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ ।
गीतसंङ्गीत स्वास्थ्यका लागि फाइदा
‘म सिएमए अध्ययन गरी स्वास्थ क्षेत्रमा लागिरहेको मान्छेले गीत पनि गाएँ ।’ कुराकानीको क्रममा उनले भनिन्, ‘मान्छेले आट्यो भने नहुने र गर्न नसकीने काम केही छैन । मान्छेमा सबभन्दा चाहिने भनेको इच्छा शक्ति हो । गीतसङ्गीतले पनि स्वास्थ्यको लागि फाइदा गर्ने भएको कारणले गर्दा पनि यो क्षेत्रमा लागेँ ।’
नर्स बन्ने सपना अधुरै
जिन्दगीमा हरेक मान्छेका हरेक खालका सोचविचारहरु आउँछन् । ममा पनि नआएको होइन । भनाई नै छ ‘देखेको पुरा हुँदैन लेखेको मात्रै पुरा हुन्छ’ । मेरो जीवनमा पनि यो भनाई सत्य सावित भयो । मेरा इच्छा र चाहना सफल नर्स बनेर बिरामीको सेवा गर्ने थियो तर त्यो मेरा सपना अधुरै रह्यो । खर्च गरेर सिएमए पढेँ, सोचे जस्तो गर्न सकिएन । तर, अझै हरेस भने खाएको छैन । मेरा ती सपना एक दिन अवश्य पुरा हुने छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।
संघर्ष र धैर्य गर्न सक्नु पर्छ
प्रकृतिले मानिसलाई सबै चिज दिएको हुन्छ । क्षमता अनि प्रतिभा अनि सबै सबै । यो मान्छेका लागि प्राकृतिक उपहार हो । यसलाई निखार्न अभ्यार र निरन्तरता जरुरी हुन्छ । म आफू कहिले पनि हार्दिन जो कसैले हार्नु हुन्न । सफलताको लागि संघर्ष गर्न सक्नु पर्छ । आफ्नो अठोटमा टिकीरहन सक्नु पर्छ । यसो भएमा एक दिन आफ्नो सपना पनि पुरा गर्न सकिन्छ । जिन्दगी संघर्ष हो । संघर्ष बिना हरेक कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिदैन । हरेस खानु हुँदैन संघर्ष र धैर्य गर्न सिक्नुपर्छ र गर्न आवश्यक छ ।
समाजलाई परिवर्तनको माध्याम
गीतसङ्गीत मनोरन्जनको माध्यम हो । अर्काेतिर गीतसङ्गीतको माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ । समाजका हरेक प्रकारका घटनाहरुलाई यसैको माध्यम मार्फत् जनता सामु पु¥याउने काम पनि गर्न सकिन्छ । कलाकारिता क्षेत्र एउटा यस्तो कुरा हो हरेक प्रकारको व्यक्तिले आ–आफनो ढंगले हेर्न सकिने र अध्ययन गर्न सकिने मनोरञ्जनको साथै धेरै शिक्षा पनि लिन सकिन्छ ।
कुरा काट्ने ठाँउ दिनु हुँदैन
सबै कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ । आफूले सही दिशामा सही पाइला चाल्नु पर्छ । समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलिने खालको गीतसङ्गीतलाई अङगाल्नु पर्छ । अरुले कुरा काट्ने ठाँउ दिनु हुँदैन । खासै अभिनय गरेको छैन मैले गाउँने मात्रै हो ।
बिहे गर्ने बेला भैसकेछ
‘तिमी आँट म पुर्याउछु’ भन्ने उखान जस्तै आफू सहि मन्ले आँट लिएर अघि बड्नु पर्छ अवस्य पनि जुन सुकै क्षेत्रमा रहन सकिन्छ । चुनौतीहरु अवश्य हुन्छन् । मन्छेहरु त यो त पागल भएछ भन्नेदेखि लिएर बिहे गर्ने बेला भैसकेछ भन्नेहरु पनि हुन्छन् । अरु पनि धेरै समस्याहरु आउँछन् । अर्काे कुरा कलाकार बन्नका लागि ठूलो चुनौती र समस्या भनेकै आफूमा कलाकारीता देखाउने क्षमता छ कि छैन ? क्षमता भएका धेरै व्यक्तिहरु पनि अवसर नपाएर पछि पर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले कला मात्रै भएर हुँदैन उसँग पैसा छैन भने ती चुनौतीहरु पार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । जहिलेसम्म कलाको महत्व बुझ्दैनन् त्यसबेलासम्म यस्ता समस्याहरु आइरहन्छन् ।
समाज र आफ्नै स्वरदेखि डर
एउटा सफल कलाकार बनेर देखाउँछु भन्ने सोचले म कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा केही हदसम्म यो सोच पुरा भएको जस्तो पनि लाग्छ । हुन म त भर्खर सुरुवात हो । कतै आफ्नो शब्द समाजमा नसुवाउने पो हुन्छ कि अनि स्वर त आफ्नो क्षमता अनुसारको हो कतै नमिल्ने पो छ कि भन्ने डर हुन्छ ।
प्रेम प्रस्ताव आए स्वीकार्छु
यो क्षेत्रमा प्रेम प्रस्ताव गर्नेहरु थुप्रै हुन्छन् । गीत गाउनेदेखि लिएर स्रोत फ्यानहरुसम्म हुन्छन् । बैरागी मोक्तानले त बिहे नै गरौ भन्ने प्रस्ताव पनि गर्नु भयो । आयो भने स्वीकार्छु तर गितमा मात्रै । तर मान्छेहरुले सेक्स प्रस्ताव पनि आउँछ भन्छन् तर मलाई चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो प्रस्ताव आएको छैन नआओस् पनि ।
सोच र विचारमा फरक फरक
कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रा मान्छे मात्र हुदैन नराम्रा पनि हुन्छन् । कलाकारीता क्षेत्रमा पनि त्यही हो । हरेक मान्छेको सोच र विचारमा फरक फरक हुने नै भए, देखिएको पनि छ । कलाकरीता क्षेत्रमा पनि विकृतिहरु नभएको होइन । मैले अहिलेसम्म भोग्नु परेको छैन सुनेको चाहि छु । तर, धेरै राम्रा मान्छेहरु पनि छन् । अब हामी कलाकारले म राम्रो छ अरु नराम्रो छ भन्न मिल्दैन । यसलाई छान्ने काम दर्शक र स्रोतहरुको हो । विकृति र विसंगतीहरु छन् भने त्यसलाई सुधार्नु पर्यो । सच्याउने अवसर पनि दिन जरुरी छ । कलाकारीता क्षेत्रलाई हरेक मान्छेको सोच, विचार र मूल्याङकन गर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो ।
भविष्य क्षमता र संघर्षमा भर
अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने कलाकारको लागि कुनै नीति नियम नभएको हुनाले यो क्षेत्रमै भविष्य छ जस्तो लाग्दैन । कलाकारको पनि क्षमता विकासमा भर पर्ने कुरा हो । कि बोल्नेको बिग्छ कि क्षमताले बिग्छ भनेझै संर्घष गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । निराशा हुनु हुँदैन जिन्दगी संघर्षमय बिताउन सक्नु पर्छ । गीत रेकर्डिङ गरेर डिजिटलको जमनामा चल्नै गाह्रो हुन्छ । चलाउनलाई धेरै कठिनाई छ ।
(प्रस्तुती : राजकुमार गोले तामाङ/काभ्रे)